घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू रोड्रिगो मोरेनो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
रोड्रिगो मोरेनोको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चा, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा, हामी उपनामका साथ फुटबल जीनियसको इतिहास प्रस्तुत गर्दछौं "Rodri“। हाम्रो संस्मरण उसको सुरुको दिनदेखि सुरु हुन्छ, जब उहाँ फुटबलमा प्रख्यात हुनुभयो। तपाईंलाई रोड्रिगो मोरेनोको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवनको चित्रण सारांश छ।
प्रारम्भिक जीवन र रोड्रिगो मोरेनोको उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ कि ऊ उत्कृष्ट, द्रुत, ऊर्जावान, साहसी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, निर्णायक गोलहरू पाउनको लागि एक आँखा हो। जहाँसम्म, केवल एक मात्र केहीले रोड्रिगो मोरेनोको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
रोड्रिगो मोरेनो बचपन कहानी - परिवार पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन:
रोड्रिगो मोरेनो माचाडोको जन्म March मार्च १61991 १ को आमा, आन्द्रीया मोरेनो माचाडो र बुबा, ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो शहरमा एडलबर्टो माचडोमा भएको थियो। उहाँ आफ्ना प्यारा आमाबुबाको पहिलो बच्चा र छोराको रूपमा जन्मनुभएको थियो, बुबालाई राम्रा-राम्रा बुवा र सुन्दर महिला जसलाई हामी अनुमान गर्छौं कि उहाँ तल आमाको आमा हुनुहुन्छ।
रोड्रिगोका एक आमा-बुबालाई भेट्नुहोस्- उनका बुवा, अडल्बर्टो माकाडो र सायद उसको आमा।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… स्पेनका लागि खेल्ने चिनारी भए पनि, रोड्रिगो दक्षिण ब्राजिलका मूल निवासी शुद्ध ब्राजिलियन मूलका हुन्। वास्तवमा, उसको प्रत्येक परिवारको सदस्य मिश्रित जाति ब्राजिल जातीय हो। तिनीहरूको छालाको र्गले उनीहरूको अफ्रिकीमा चिन्हहरू दर्शाउँछ।अफ्रो-ब्राजीलियन) परिवार जरा।
रोड्रिगो मोरेनोले आफ्नो जीवनको शुरुका वर्षहरू ब्राजीलको समुद्री तट रियो दि जेनेरियोमा बिताए। ऊ मारियाना मोरेनो नामको आफ्नो प्यारी बच्चा बहिनीको साथ हुर्किए। तल साना मारियानाको उनको फोटो छ, उनको ठुलो भाइ रोड्रिगो, उनीहरूको बुवासँगै चित्रण गरिएको ब्राजिलमा उनीहरूको पारिवारिक प्रांगणमा।
Rodri, आफ्नो बुबा र बच्चा बहिनी मारियाना को एक शुरुआती दिनों मा एक दुर्लभ तस्वीर।
कसरी स्प्यानिश फुटबल यात्रा रोड्रिगोको लागि शुरू भयो: रोड्रिगो मोरेनोको बुबा, एडलबर्टो माकाडो (एक पूर्व फुटबलर) उसको परिवारमा खेल प्रेमको लागि जिम्मेवार थियो। ब्राजिलका पूर्व फुटबलर जसले s० को दशकमा खेलेका थिए। उसको बुवा Iomar do Nascimento का भाई हुन्। AKA माजिन्हो (अर्को फुटबलर जो १ 1994 XNUMX world को विश्वकप जित्नेहरूको हिस्सा थिए). तपाईंलाई थाँहा थियो?… मजिन्होका बुबा हुन् Thiago Alcantara र रफिन्हा यसको मतलब उनीहरू उहाँका सचेरे भाईहरू हुन्।
स्पेनिश फुटबल स्कूल: सन्‌ १ 1994 XNUMX Ear को सुरुमा रोड्रिगोको बुबा अडलबर्टोलाई नियुक्त गरियो फुटबल निर्देशक उनको १ 1994 XNUMX F फिफा विश्व कप विजेता भाई माजिन्हो द्वारा जसले स्पेनको भिगोमा फुटबल स्कूल प्राप्त गरे। केवल चीजहरू स्पष्ट पार्न, भिगो अटलान्टिक महासागरको छेउछाउ र एउटा शहर र नगरपालिका हो जुन उत्तर पश्चिमी स्पेनमा अवस्थित छ। स्पेनमा एउटा ठूलो फुटबल व्यवसाय प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकोले रोड्रिगो मोरेनोका आमा बुबाआमाले आफ्नो पूरा घर सानो बालकको रूपमा स्पेनमा बसाइँ सरेका देखे।
रोड्रिगो मोरेनो बचपन कहानी - शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
ब्राजिलमा छँदा उनका सम्पूर्ण परिवार स्पेनमा बसाउनु भन्दा पहिले, रड्रिगो आफ्ना चचेरे भाईहरूसँग रियो दि जेनेरियोको बर्रा डा तिजुकामा रहेको ब्यारेल स्कूलका सबै विद्यार्थीहरू थिए। रोड्रिगोका लागि, आफ्नो बुबाको पाइला अनुसरण गर्नु आवश्यक थियो किनकि उसले grade औं कक्षा अघि फुटबलमा भाग लिन थाल्यो। उचित फुटस्सल शिक्षा प्राप्त गर्न, रोड्रिगोका अभिभावकले उनलाई फुटबल स्कूलमा भर्ना गरे Escolinha फ्लेमेन्गो सुरुमा ऊ aged बर्षको थियो।
रोड्रिगो एस्कोलिन्हा डो फ्लामेन्गो जुनियर्स टोलीका स्टार थिए (एउटा टोली जहाँ उनका बुवाले आफ्नो वरिष्ठ क्यारियरबाट अवकाश लिए)। उनले त्यहाँ धेरै च्याम्पियनशिपहरू खेले जहाँ उनी आफ्नो टीमका साथीहरूबाट बाहिर निस्के, धेरै जितेर फुटसल चैम्पियनशिपहरू बच्चा जस्तो।
रोड्रिगो मोरेनो आफ्नो प्रारम्भिक ट्राफियां र एक बच्चा फुटबलर को रूपमा सम्मान संग। उनी एकेडेमीमा सबैभन्दा राम्रो बच्चा थिए।
रोड्रिगोको लागि, फुटबल खेल्ने उद्देश्य भनेको बुबाले छोडेको ठाउँबाट उठाउनु थियो, त्यो हो, आफ्नो परिवारको सपनाहरू निरन्तर बाँच्न। आदर्श रूप मा, यो आफ्नो बुबा को लागी गाह्रो थियो Adalberto Machado र काका माजिन्हो सेवानिवृत्ति संग सम्झौता गर्न।
पढ्नुहोस् फर्नोन्डो लेलरेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जबकि उसका दोस्रो चचेरे भाई, रफिन्हा र Thiago Alcantara ब्राजिललाई सानो बच्चाको रूपमा स्पेनमा छोडियो, रोड्रिगो आफै सानै किशोरावस्थामा स्पेनमा बसाइँ सरे र गलिसियाको स्वायत्त समुदायमा बसोबास गरे। थियगो र रफिन्हा पहिलो पटक सन्‌ १ football football acade मा उनीहरूको बुबाको फुटबल एकेडेमी लगानीमा खेले र रोड्रिगोका बुबाले उनीहरूको हेरचाह गरे। ती दुई केटाहरू केहि समय रोड्रिगोको घरमा सुत्थे जब माजिन्हो र तिनकी पत्नी व्यापारको लागि यात्रा गर्थे।
रोड्रिगो फ्लेमेन्गोका लागि फुटसल अभ्यास खेलेपछि ब्राजिल छाडे र २०० 2003 मा स्पेनमा आफ्नो परिवारमा सामेल भए। दोस्रो वर्षमा उनी आइपुगेपछि (२०० 2005 मा) उनका चचेरे भाईहरू रफिन्हा र Thiago Alcantara बार्सिलोनाको ला मासियामा प्रगति भएको थियो। तल रड्रिगोको फोटो छ त्यस समयमा उहाँ प्रसिद्ध एफसी बार्सिलोना एकेडेमीमा आफ्ना दोस्रो चचेरे भाईहरूसँग भेट्न आउनुभयो।
२०० Raf मा उनका चचेरे भाई- थाआगो र रोड्रिगोलाई भेट्न जाँदा रफिन्हाको फोटो, उनीहरूको समयमा एफसी बार्सिलोना ला मासिया न्यूबीजको रूपमा।
रोड्रिगो मोरेनो बचपन कहानी - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
ब्राजिल संग फुटसल अनुभव उसलाई मद्दत गर्‍यो। उनका भान्जा भाइबहिनीहरू एफसी बार्सिलोना एकेडेमीमा छँदा, रोड्रिगोले तल चित्रमा उरेकासँग खेल्दै रहेछन् जहाँ उनले आफ्नो युवा क्यारियरमा उत्कृष्ट प्रभाव पारे। क्लबसँगको उनको प्रदर्शनले उनलाई सेल्टा भिगोको लागि आवेदन दिन अवसर प्रदान गर्यो, स्पेनको ठूलो एकेडेमी जसले यस्तै किंवदन्तीहरू बनायो। Iago Aspas.
फुटसलको सहयोगमा रोड्रिगोले स्पेनमा आफ्नो युवा क्यारियरको शुरुवात राम्रो गरिसकेका थिए।
सन् २०० 2005 मा, रोड्रिगोको प्रगतिले उनलाई परिक्षणहरू पार गर्यो र सेल्टा भिगोको युवा वर्गमा सामेल भयो। उसको नयाँ क्लबमा आइपुगेको केही महिना भित्र, आफ्नो प्रतिभा तुरुन्त टाउको हुन थाले र ठूला क्लबहरु मा चासो फेरि एक पटक आयो। ग्यालिसियनहरूसँग चार बर्ष पछि, रियल म्याड्रिडको अविश्वसनीय प्रस्तावलाई प्रतिरोध गर्न सकिएन।
रद्रिगोका बुबा आफ्नो रियल म्याड्रिड स्थानान्तरणको समयमा एक स्काउट थिए। सुपर बुबाले आफ्नो छोराको ,300,000००,००० यूरो स्थानान्तरणलाई अन्तिम रूप दिन मद्दत गर्नुभयो। त्यतिखेर १-बर्षे रोड्रिगोले २०० in मा म्याड्रिड चुनौती सफलतापूर्वक लिए। उनले लस ब्लान्कोस पक्षका लागि महत्वपूर्ण गोल गरे।
रिड्रिगो रियल म्याड्रिड एकेडेमीका सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थीहरू मध्येका एक हुन्थे।
रोड्रिगो मोरेनो अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - फेम कथाको लागि रोड:
रियल म्याड्रिडका पूर्व प्रबन्धक मनुएल पेलेग्रिनीले पहिलो टीममा बोलाए पछि रोड्रिगो पहिलो टिममा उज्ज्वल हुने आशा राखेका छन्। कष्टदायी चीजहरूले योजना अनुसार काम गरेनन् जस्तो कि मनुएल पेलेग्रीनीलाई बर्खास्त गरियो र नयाँ जोसे माउन्टेन नियुक्तले रोड्रिगोलाई उसको योजनामा ​​राखेन। जोस मोरिन्हो केवल ठूला खेलाडीहरूमा रुचि राख्दछन् (मनपर्‍यो Ozil, एन्जिल डि मारिया, इमानुएल एडबेयरे) र यो बायाँ रोड्रिगो क्लब छोड्नु बाहेक कुनै विकल्पको साथ निराश भयो।
जोस मोरिन्होले रोड्रिगोलाई बेनफिकामा बेचे जहाँ उनले आफ्नो खेल स्थानको लागि अर्को प्रतिस्पर्धा भेट्टाए। उनले पौराणिक कथासँग अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए पाब्लो एमार, Javier Saviola र नुनो गोम्स। बेनफिका (उपनाम दिइएको छ) ईगलहरू) पछि रड्रिगोलाई बोल्टन वान्डरर्सलाई loanणमा पठाउनको लागि एउटा सम्झौता भ broke्ग गरे पछि उनले ती किंवदन्तीहरू अनसाट गर्न सकेनन।
बोल्टनमा (म्यानचेस्टर, युके मा अवस्थित), रोड्रिगो एक्लै बस्नुभयो, यस पटक बुबासँग पहिलो पटक उनको छेउमा हुनुहुन्न। क्लबमा, उनले पूर्व मैड्रिड टीम टोलीसँग पुनर्मिलन गरे मार्सोस एलोसो जसले चेल्सीमा महान कार्यहरू गरिरहे। दुर्भाग्यवस, त्यहाँ इ England्गल्यान्डमा रोड्रिगोको लागि ठूलो गर्जनको सफलता थिएन किनकि गरिब केटाले दक्षिण कोरियाका फुटबलर ली चुंग-योंगलाई आफ्नो मनपर्दो दायाँ-पखेटा स्लटको लागि भेट्टायो।
रोड्रिगोले आफ्नो क्यारियरको प्रारम्भिक चरणको दौडान एउटा गाह्रो घडी सहनुभयो।
बोल्टनको माध्यमबाट एक संक्षिप्त सफल सफल मार्ग पछि, रोड्रिगो आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूको प्रस्थान पछि बेनफीकामा फर्किए (पाब्लो आइमर, जेभियर सियोविला र नुनो गोम्स) जो एक पटक आफ्नो ओहदाको स्वामित्वमा थियो।
रोड्रिगो मोरेनो बायो - फेम टू फेम स्टोरी:
इ England्ल्याण्डमा आफ्नो कडा परिश्रम पछि, रोड्रिगो पोर्चुगल फर्के जहाँ उनले आफ्नो क्यारियरको नयाँ अध्याय खोले र आफ्नो नाम कमाउन थाले। यस पटक, उहाँ बेनिफिकामा राम्रो विकास गर्नुभयो, लगातार आफ्ना गुणहरू उत्कृष्ट प्रभावमा देखा पर्नुभयो।
पढ्नुहोस् अन्डर हेरारा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
चाहे आफ्नो चहकिलो गति प्रयोग गरेर वा ड्रिबलमा उसको अप्रत्याशितता प्रयोग गरेर, रोड्रिगो आधुनिक खेलमा स्ट्राइकरलाई चाहिने सबै चीजको लागि परिचित छन्। मनपर्दोसँग खेल्दै Nemanja Matic, निकोलस गैतान, ऑस्कर कार्डोजो र एक्सेल विट्सेल, रोड्रिगोले क्लबलाई उनीहरूको प्रख्यात ट्रबल जित्न सहयोग पुर्‍यायो (प्राइमिरा लीगा, टाका डी पोर्तुगल र टाका दा लीगा).
रोड्रिगो मोरेनोले बेनिफिकालाई २०१-2013-२०१ domestic घरेलु ट्रबल - प्राइमिरा लीगा, टाका डी पोर्तुगल र टाका दा लीगा जित्न सहयोग पुर्‍यायो।
एक प्रभावशाली goals 45 गोल स्कोर र पुर्तगाली दिग्गजहरूको लागि ११ 17 आउटिंगमा १ 118 सहयोग पुर्‍याउँदा ब्यालेन्शिया किन प्रतिभाशाली आक्रमणकारीलाई प्राप्त गर्न यत्तिको उत्सुक थियो भनेर राम्रोसँग वर्णन गरियो। रोड्रिगोले आफ्नो पहिलो सत्रमा भ्यालेन्सिया अन्तर्गत एक आशाजनक छाप गरे नुनो एस्पेरिटोटो सान्टो, क्लबलाई मद्दत गर्दै च्याम्पियन्स लिगको लागि योग्यता हासिल गर्यो।
फेरी, २०१/2018/२०१ season सत्रमा रोड्रिगोले क्लबलाई उनीहरूको प्रतिष्ठित कोपा डेल रे खिताब जित्न मद्दत गरे पछि उसले निर्णायक खेलमा एफसी बार्सिलोनालाई २-१ ले जित्यो।
रोड्रिगो गोलले उसको भ्यालेन्सिया टोलीले एफसी बार्सिलोनालाई २०१–-१– कोपा डेल रे जित्न मद्दत पुर्यायो।
लेखनको समयमा, रोड्रिगोले भर्सनियालाई चैम्पियन्स लिगको अन्तिम १ to मा प्रगति गरेको अनुमान गरे जुन क्लबले 16 बर्षको लागि यसबाट गुमाए। स्पेनी स्ट्राइकरबाट आएको छ कुनै शou्का नायकको शून्यको नजिक पिचमा उनको वीरताहरूको लागि सँधै याद रहनेछ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
रोड्रिगो मोरेनो पत्नी र बच्चा:
उनको ख्याति वृद्धि संग, यो निश्चित छ कि फुटबल प्रशंसकहरु मा सोच्नु पर्छ पनी आफ्नो स्टार मानिस एक प्रेमिका छ कि छैन यदि ऊ वास्तवमा विवाहित छ भने (श्रीमती छ)। त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन कि रोड्रिगोको प्यारा देखिने खेलको विशिष्ट शैलीको साथ उनलाई प्रत्येक सम्भावित प्रेमिका वा पत्नीको इच्छा सूचीको शीर्षमा राख्दैन।
सफल फुटबलर पछाडि, त्यहाँ एक ग्लैमरस महिला छ, जो एक जनालाई आफ्नो मुटु कब्जा गर्छ। रोड्रिगोको प्रेमिकाको नाम अझै अज्ञात छ। जे होस्, उनी आफ्नो परिवारका प्रत्येक सदस्यसँग नजिक देखिन्छन् विशेष गरी उनको फुटबलिंग कजिनका WAGs।
रोड्रिगो मोरेनोको प्रेमिकालाई भेट्नुहोस्।
रोड्रिगो र उनकी प्रेमिकाले १२ अक्टुबर, २०१ on को इन्स्टाग्राम मार्फत उनीहरूको सम्बन्ध सार्वजनिक गरे। एक वर्ष पछि (अक्टोबर २०१ around को आसपास) उनीहरू दुबै आफ्नो पहिलो बच्चालाई स्वागत गरे। रोड्रिगोको बच्चा इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक रूपमा असामान्य तरिकामा प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले उनलाई हेलोवीनको पोशाकमा देखेको थियो।
रोड्रिगो मोरेनो र प्रेमिकाले आफ्नो पहिलो बच्चालाई २०१ child मा स्वागत गरे।
रोड्रिगो मोरेनो बाल्यकाल कहानी - व्यक्तिगत जीवन:
रोड्रिगो मोरेनोको व्यक्तिगत जीवन र फुटबलबाट टाढाका विचारहरू चिन्नुले तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरूवात गर्दै, ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले आफ्ना शब्दहरूलाई मायापूर्वक राख्छ (उनको इन्स्टाग्राम भित्तामा क्रेस्ट गरिएको) जो भन्छन;
"विश्वास र मानसिक शक्ति भएकाहरूका लागि असम्भव धारणाको कुरा मात्र हो।"
रोड्रिगो मोरेनो निजी जीवन तथ्यहरू बुझ्दै।
रोड्रिगोको मानसिक कठोरता उसको लचिलोपन र विश्वासको एक उपाय हो। यो एक व्यक्तिको रूपमा उसको सफलताको लागि नेतृत्व गरेको छ। उहाँ त्यस्तो अवसर हुनुहुन्छ जुन हरेक अवसरमा आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्दछ। यदि कुनै मानसिक उत्तेजना छैन भने, रोड्रिगो अल्छी हुन्छन् र आफ्ना दैनिक गतिविधिहरू अघि बढाउनको लागि प्रेरणाको अभाव हुन्छ। साथै, ब्राजिलबाट स्पेन, त्यसपछि पोर्चुगल र अन्तमा इ England्गल्यान्डमा सर्दै गर्दा इ England्गल्यान्डले प्रमाणित गरेको छ कि हाम्रो आफ्नै रोड्रिगोले आफूलाई वरपरका विभिन्न वातावरण र उर्जामा अनुकूल बनाउन सक्छ।
कुकुरका लागि योग्यता: फुटबल खेलाडीहरू उनीहरूको नाम राख्छन्: लिओनेल मेस्सी, एलेक्सिस सं्यान्ज आदि उनीहरूको घरपालुवा जनावर र रड्रिगो एक अपवाद छैन। यहाँसम्म कि त्यहाँ एक भनाइ छ कि आधुनिक खेलमा कुनै वफादारी छोडियो, यसले पक्कै पनि रोड्रिगोले आफ्नो कुकुरको जस्तो समानता हटाउँदैन जुन कहिलेकाँही उसले आफ्नो भ्यालेन्सिया जर्सी लगाउँदछ।
पढ्नुहोस् Ferran Torres बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
फुटबलरको आफ्नो कुकुरको लागि ठूलो समानता छ।
रोड्रिगो मोरेनो बाल्यकाल कहानी - पारिवारिक जीवन:
रोड्रिगो मोरेनोको बुबामा अधिक: एडलबर्टो माचाडो जून १31964 को तेस्रो दिनमा जन्मेका थिए। उनी एक सेवानिवृत्त ब्राजीलका फुटबलर हुन् जसले बाँया-पछाडि खेलेका थिए। छोरा जस्ता बुबा जस्तै, रोड्रिगोका बुवा फ्लेमेन्गो युवा एकेडेमीमा भाग लिए। दर्दनाक रूपमा, एडलबर्टोको वरिष्ठ क्यारियर दुखद नोटमा शुरू भयो किनकि उनले आफ्नो पहिलो वरिष्ठ क्यारियर वर्ष एक खुट्टा बिच्छेदको कारण दरकिनार गरे।
फ्लेमेन्गोसँग मात्र खेलेको एक क्लबका व्यक्तिले आफ्नो वरिष्ठ वर्षहरूमा घाइतेको साथ कठोर संघर्ष गरे। यस दुखद विकासले २ career बर्षको उमेरमा उनको क्यारियरको अन्त्य बढायो।
रोड्रिगो मोरेनोको ड्याड - एडल्बर्टो माकाडोको बारेमा बढी जान्ने।
रोड्रिगो मोरेनोको आमाको बारेमा अधिक: रोड्रिगोको आमाको बारेमा जानकारी, Andréia Moreno Machado मिडिया द्वारा धेरै हदसम्म अलिखित लेखिएको छ। Andréia लेखनको बखत उनले आफूलाई मिडियाबाट आएको प्रदर्शनबाट जोगाइराखेको छ, केवल एडलबर्टो (उनका पति), रोड्री र मारियाना (उनको बच्चाहरू) मा उनको मातृत्वको कर्तव्य पूरा गर्न समय भएको थियो।
रोड्रिगो मोरेनोको बहिनीमा बढी: उनको हेराईबाट हेराई गर्दै यो निश्चित छ रोड्रिगोको बुवा, आफ्नो आमाको विपरीत, माचाडो परिवारमा एक मजबूत जीन छ। मोरेनोको बहिनी मारियाना उनको बुबा जस्तो देखिन्छन। तल दुई राम्रा साथीहरू (बुबा र छोरी) को फोटो छ जुन २०० 2005 मा चिडियाखानामा उनीहरूको भ्रमणमा लिएका थिए।
रोड्रिगो मोरेनोको बहिनी मारियाना एक सानो छँदा उनको बुबासँगै चित्रित छन्।
लेख्ने समयमा मारियाना इन्स्टाग्राममा निजी जीवनको आनन्द लिन्छिन्। उनले नजिकका साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूलाई मात्र उनको खातामा पहुँच अनुमति दिन्छ। उनको आईजी भित्ता पढ्छ कि "उनीसँग जीवनमा असल चीजहरू छन्“। उनको सफल ठूलो भाई संग गुणस्तर समय खर्च गर्न योग एक के योगसुखी जीवन'मारियानाको अर्थ हो।
रोड्रिगो मोरेनो सिस्टर- मारियानालाई भेट्नुहोस्।
रोड्रिगो मोरेनो तथ्य - जीवनशैली:
Around 6.8m (वार्षिक ज्याला) को आसपास पाउनु र worth 50.00m को लायक हुनुलेखनको समयमा) निश्चित रूपमा रोड्रिगोलाई करोडपति फुटबलर बनाउँदछ। तपाईको पैसा पनि साँच्चिकै मूल्यवान छ, रोड्रिगोले यसलाई चलाउन धेरै समस्या हुँदैन। उहाँसँग खर्च / प्रदर्शन आफ्नो धन र पैसा बचाउने बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिभा छ। एक औसत कार हुनु र आफ्नो नम्र जीवनशैली को प्रतीक।
उनको जीवनशैली चिन्ने।
रोड्रिगो मोरेनो अनटोल्ड तथ्यहरू:
रोड्रिगो मोरेनोको ट्याटू: उ संग "ड्र्यागन ट्याटू"जसले आफ्नो बायाँ हातमा भ्यालेन्सिया लोगोको वरिपरि आफैंले लपेटेको एउटा ड्रेगनलाई जनाउँछ। अब, तल चित्रित यो ट्याटूको अर्थ के हो?…
रोड्रिगो मोरेनोको ट्याटू।
रोड्रिगोको ट्याटूमा, ड्र्यागनले आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जब उनी क्लबलाई निर्देशित गर्छन् (जसले भ्यालेन्सिया लोगोलाई जनाउँछ)। उनले विपक्षी टोलीहरू विरूद्ध प्रक्रिया चलाउँदै गोलहरू पनि फ्याँक्यो।
धर्म: रोड्रिगो शहर (रियो दि जेनेरियो) बाट आएका छन् जहाँ आधाभन्दा बढी जनसंख्या (.74.5 51.1.%%) ले ईसाई धर्म अपनाउँछन् र XNUMX१.१% क्याथोलिकहरू हुन् (विकिपीडिया रिपोर्टहरू)। यी तथ्यहरूको आधारमा, सम्भवतः रोड्रिगो र उसको परिवारका प्रत्येक सदस्यले क्याथोलिक धर्मको ईसाई धार्मिक विश्वास अपनाएको हुन सक्छ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… रोड्रिगोको जन्म सहरको घर हो ख्रीष्टको मुक्तिदाता मुक्तिदाता (तल चित्रमा), अक्सर रूपमा उल्लेख विश्वकै नयाँ सात आश्चर्यहरू मध्ये एक र ब्राजिलियन क्याथोलिकहरूको लागि गर्वको स्रोत।
उनको धर्मको एउटा संकेत।
भ्यालेन्सिया को लागी माया लामो समय अघि शुरू भयो: भ्यालेन्सिया सीएफको साथ रोड्रिगोको गन्तव्य एक बच्चाको रूपमा पहिले नै खाली गरिएको थियो। उसको २०० throw थ्रोब्याक फोटोले यो सबै भन्छ।
Valencia समर्थक वर्ष 2004 को रूप मा आफ्नो शुरुआती दिनहरु को एक दुर्लभ तस्वीर
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो रोड्रिगो मोरेनो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
कृपया माथिबाट सुरू गरेर दोस्रो अनुच्छेदमा सुधार गर्नुहोस्। "विश्लेषण उनको प्रारम्भिक जीवन शामिल छ," उनको "मा" उनको "परिवर्तन गर्नुहोस्।
जवाफ दिनुहोस् हनुमन्था सिद्दनावर
सुधारको लागि धन्यवाद